Matongerwo eNyika, 26 Zvita 2017
Chipiri 26 Zvita 2017
Nherera Dzofadzwa neChikafu cheKisimisi muChinhoyi
Nherera dzinochengetwa pamusha weGood Shephard muChinhoyi nhasi dzaita zuva rekisimusi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nekutamba.
VaKindness Paradza Vanogovera Zvekudya kuMakonde paZororo reKisimusi
Rimwe Bato Rinopikisa Roshaya Chivimbo neHurumende yaVaMnangagwa
Mutungamiriri werimwe remapato anopikisa re People’s Democratic Union Party, VaChristopher Bengwani Sibindi, vanoti havaoni hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzejekerere gore rinouya.
Vanotengesera paAvondale Voshaya Bhizinesi
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market, iyo iri paAvondale Shopping Centre muHarare, vanoti dambudziko remari riri kudzosera shure basa ravo.
Munyori mukuru weMDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai, vaDouglas Mwonzora, vanoti mashoko akaburitswa nerimwe bepanhau haana kutsanangura nemazvo zvavakataura.
VaMnangagwa Vanodoma VaChiwenga naVaMohadi seVatevedzeri Vavo muZanu PF.
Mutauriri waVaMnangagwa muhurumende, Va George Charamba, vakabuditsa gwaro neMugovera iro vakatumira kuvatori venhau vachitsanangura nezvekudomwa kwevaviri ava.